umqondo Marketing kwembulwa ezokuphatha kanye nebhizinisi ifilosofi umqondo, okungukuthi, enhlanganweni komnotho ukukhiqizwa ukuze kuhlangatshezwane nezidingo inhloso zabathengi kokubili yemvelo futhi ngamunye izimpahla kwezomnotho. Kulesi sisekelo, singakwazi ukuthola ukuthi ukumaketha - kuyinto uhlelo oluhlangene ukuze inhlangano zokukhiqiza kanye yokuthengisa imikhiqizo eseqedile, okuhloswe ngalo ngokwanelisa zonke izidingo emakethe, kanye ukuthola imihlomulo ngokomnotho yokwenziwa komsebenzi. Kodwa omkhulu kakhulu kwalesi simiso yokuthuthukisa isu ngempumelelo kanye amaqhinga yokuziphatha ezimweni ezimakethe ngenxa ekutadisheni isimo somnotho.
Kwimakethe kunzima kakhulu ukuba baveze imizwa yabo futhi kufakazeleke ukuthi imikhiqizo olunikezwa inkampani esanda kubalwa, ngcono kakhulu kunaleyo okuyiwona kufunwe kakade. Endaweni yokuncintisana zonke ukunyakaza, zonke izinyathelo, ngisho nomncane, kungaba juqu. Yingakho kunesidingo ukucabanga futhi uhlele yonke imininingwane ibhizinisi, ngoba noma ubani oza ibhizinisi ufuna impumelelo.
Basic ukumaketha imiqondo kuzosiza baqonde kabanzi kule isayensi nzima, kodwa kakhulu.
Umqondo wokuqala ukuthi udinga ukukhumbula - lena isidingo okungukuthi nomuzwa ojulile ukuthi umuntu uzizwa kanjani uma utho kudingekile kakhulu ngalesi sikhathi. Udinga njengendlela mqondo has a zindlela ngezigaba:
1. Kuye izimbangela kungaba: azalwa naso (ukudla, izingubo) noma atholwe (impumelelo, imali, ukuqashelwa).
2. Ngenxa imiphumela empilweni futhi isimo jikelele isidingo sabantu kungaba: omuhle (imfundo, ezemidlalo) noma kube kubi (utshwala, ukubhema).
Okwesibili, qiniseka ukuthi singaba usizo kabi saqala Abakhangisi - Umqondo isisusa. Lona nje yigama elididiyelayo, ngokusebenzisa okuyinto bakwenze umqondo futhi ngokuyisisekelo ukumaketha, ngoba isisusa - kuba nesidingo ukuthi lamanje emakethe imvelo isibe esiphuthumayo. Kufanele kuqashelwe ukuthi lena okuwukuphela kwendlela esakha ngokugcwele ukuziphatha abantu abangekho abathengi.
Wesithathu elithi - isidingo. Kuyinto efanayo kakhulu emvelweni ukuze ingoma, kodwa uhluke yokuthi lesi sidingo isivele yokutholwa uhlaka ifomu ethize.
Okwesine, umqondo elandelayo ngokunengqondo kusukela odlule ezintathu. Wish - elisekelwa ngentando yomuntu isidingo.
Njengoba yayazi lezi ukumaketha imiqondo eyisisekelo ukuthi kungase kubonakale ilula kakhulu futhi banal Uma unganakile, singakufinyelela impumelelo enkulu, yebo, kuphela uma isicelo efanele lwati lolutfolakele.
Namhlanje ngokuphelele akukwazeki overestimate ukubaluleka isayensi wokwakha isu yomsebenzi emakethe, eqinisweni ingasetshenziswa ukuze akuveza athi angama, ukumaketha umkhiqizo ezintsha wamavukelambuso ukuheha amakhasimende amasha futhi andise emakethe imikhiqizo enjalo. Izindlela ukuhambisa eziningi, futhi zonke ibhizinisi kumele ngokuzimela ukukhetha indlela lokho ozokhula, lapho izici ukuba banake, futhi elalingelona ezithinta umsebenzi inkampani, kodwa noma kunjalo akavunyelwe bayakhohlwa nemiqondo eyisisekelo nokumaketha.
Ngakho, akunakwenzeka ukubala ngokunembile bangaki izinkampani babhaliswa emhlabeni wonke, okuyinto zinikeza imikhiqizo efanayo noma ezithi azifane, naphezu kwale mizamo, othile imisebenzi ngempumelelo futhi uthole inzuzo enkulu, kanti abanye basala, bengakwazi ukukuveza kahle abakushoyo futhi ukufakazela ukuthi uyakufanelekela ukunakwa. Kungani lokhu kwakwenzeka? Kulula kabi. Isizathu siwukuthi inkampani ephela yakhohlwa nemiqondo eyisisekelo ukumaketha, okuyizinto elula kakhulu, kodwa ngendlela emangalisayo newusizo!
Sea usawoti ekudleni hhayi kuphela ... Beauty Secrets
Yini eyenzeka ngempela emzimbeni wakho uma uphuza ikhofi?
Indlela yokwenza amakhandlela ezibaziweyo
Indlela yokukhetha ukubethela: amathiphu
"Lenovo A328". Flash kanye nezici zayo